Ma la rumaysan karaa in yuusuf garaad dhex dhexaad yahay.
Mar uu Yuusuf Garaad u waramay Radiyo Dalmar wuxuu ku dooday in uu Isaga iyo BBCda Laanta Somaliguba ay dhexdhexaad arimaha Somaliya ka socda ka yihiin, ku doodid uu Yuusuf Garaad ku dooday in uu dhexdhexaad yahay Waxay i xusuusisay Sheekada soo socota.
Waa buu Dhurwaa intuu inta Habar Dugaa ah isugu yeeray ku dooday in uu aamin yahay oo dhexdhaxaad yahay oo uu caadil yahay wuxuuna yiri ,,war aniga waxaa iga soo horjeeda oo igu kacsan kuwo dugaag ah oo sixun wax u sheegayaal ah ee aniga ka Dhurwaa ahaan waxaan ahay aamin, dhexdhexaad iyo Caadil oo wixii la igu aamino sixun oo aan waafaqsanay Xeerka la iigu dhiibay uma isticmaalo.
Habar Dugaag waxay ku noqotay Gada cusub ee Dhurwaa la soo baxay yaab iyo Amakaag iyo Af kala qaadid, iska daa in ay Habad Dugaa Dhurwaa ka yeelan in uu aamin, caadil iyo dhexdhexaad yahay ee soo Qaaditaanka iyo soo Bixitaanka uu Erayadaasi afkiisa ka soo bexeen baa ka fajicisay oo ka yaabisay Habar Dugaag oo dhan.
Habar Dugaa intay is dhugteen bay waxay dhaheen war Dhurwaa in aad naga qosol siisid baad rabtaa.
Dhurwaa Dhulkuu isla dhacay oo uu ooyey oo uu ku celceliyey Tijaabo iga qaada Maanta waxaan cadaynayaa in aana ahay waxa la iga sheegayo ee aniga shaqsiyadayda wax loogu dhimayo.
Habar Dugaag oo la yaaban sida uu Dhurwaa ugu adkaysanayo in uu aamin, dhexdhexaad iyo caadil yahay waxay wada tashi iyo dood dheer ka dib isku raaceen in la tijaabiyo waxayna Dhurwaa ku dheheen war dhurwaa waxanu u malaynaynaa in ay adduunyo Gadoonkii tahaye bal waan ku tijaabinaynaa ee raac Hashaa iyo Nirigta ka dhaxaysa Habar Dugaag oo dhan ee haddii aad ilaa iyo Qorax dhacii adigoo waxba gaarsiin soo celisid Magaca Aamin waa laguu bixin waxanuna qiraynaa in aad aamintahay.
Dhurwaa wuxuu raacay Hashii iyo Nirigtii isagoo ku dadaalaya in uu magacaa Aamin mar uun qaato, wuuna is celceliyey Dhurwaa ilaa iyo Duhurkii, Casarkii bay Gaajo ku dhagtay Dhurwaa wuxuuna ku fakiray in uu Hasha iyo Nirigta meelo aan Ishu ku dhacay ka goosto oo uu ka cuno wuxuuna ka goostay Hashii Candhadii Nirigtiina Bishimihii.
Maqribkii buu dhurwaa soo dheelmiyey Hashii iyo Nirigtii markii ay Habar Hugaa u muuqdeen mudutuushii Hasha iyo Nirigta way farxeen waxayna yiraahdeen ,, dhurwaa waa aamin´´
dhurwaan Farxad buu la dhacay markuu maqlay dhurwaa waa aamin.
libaax baa soo booday oo yiri ,, war ma hubsade iyo beenaale waa walaalo e aynu wax hubsano´´ wuxuuna soo jeediyey in Hasha iyo Nirigta la isku sii daayo si ay isu nuugaan .
markii Nirigtii Hoyadeed lagu sii daayey oo ay ku oroday si ay Hoyadeed u nuugto buu Dhurwaa qoslay oo uu yiri ,, nadhash nadhash maxay ku nuugtaa amase ay ka nuugtaa afrihiiba go´ane ´´ isagoo ka wada maxay la ordaysaa waxay wax ku nuugto iyo meel ay wax nuugto midna ma leh.
Habar Dugaa in tay naxeen bay waxay yiraahdeen waligaa dhurwaa dhurwaa baad ahaan noqona maysid aamin, dhexdhexaad iyo caadil midna.
Dhurwaa oo u qaadan la in laga ceshaday magacii ayaa yiri ,, aniga Hasha iyo Nirigta soo cili baad i tiraahdeen oo waan soo celiyey mana aaydaan i oran candhada ha ka goosan sidaa darteed aamin baan ahay, oo Maantoo dhan Hasha iyo Nirigtaan ku dhexjiray oo dhexdhexaad baan ahay oo ugu dan bayntii Hasha intaan ka goostay uun baan Nirigtana ka goostay oo caadil baan ahay ee maxaad magac iigu diidaysiin´´ .
Hadda waraysiga uu yuusuf garaad radiyo dalmar siiyey wuxuu u dhegmaa shekad iyo isagoo yiri
,, aniga ka yuusuf garaad somaliya oo dhan baa wax ka soo tabi la iyiri lamana oran puntland ha dacaayadayn wax xunna ha ka been abuurin sidaa darteed aamin baan ahay, oo somaliya dhexdeeda baan ka soo waranaa oo sidaa derteed dhexdhaxaad baan ahay, oo ugu danbayn somaliland iyo Carte si fiican oo siman baan iidheh ugu samaynaa oo uma kala eexano oo caadil baan ahay.